DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP 620 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
N'ụwa taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike iburu kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ site na ọnụahịa ego kwesịrị ekwesị. Ma ọbụna ngwaọrụ kachasị ike agaghị adị iche na mmefu ego, ọ bụrụ na ịnweghị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị maka ya. Onye ọrụ ọ bụla nke gbalịrị ịwụnye sistemụ arụmọrụ ya n'onwe ya abịawo usoro nhazi software. Na nkuzi nke oge a, anyị ga-agwa gị otu esi budata ngwanrọ niile dị mkpa maka laptọọpụ HP 620.
Usoro ụzọ ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ HP 620
Eleda mkpa ọ dị ịwụnye ngwanrọ na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Tụkwasị na nke ahụ, ịkwesịrị ịmeghari ndị ọkwọ ụgbọala niile mgbe niile maka arụmọrụ kachasị na ngwaọrụ ahụ. Ụfọdụ ndị ọkachamara na-achọpụta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala siri ike ma chọọ nkà ụfọdụ. N'ezie, ihe niile dị mfe, ma ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu na ntụziaka ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, maka ngwa laptọọpụ HP 620 nwere ike ịwụnye na ụzọ ndị a:
Ihe ndị ọkachamara na-emepụta ọrụ bụ ebe mbụ ị ga-achọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ gị. Dịka iwu, na saịtị ndị ahụ, a na-echekwa software ahụ mgbe niile ma dị ezigbo nchedo. Iji jiri usoro a, ọ dị mkpa ime ihe ndị a.
Soro njikọ dị na ụlọ ọrụ gọọmenti HP.
Hụ òké n'elu taabụ. "Nkwado". Ngalaba a dị n'elu nke saịtị ahụ. N'ihi ya, ị nwere menu ọpụpụ nke dị n'okpuru n'okpuru. Na ndepụta a, pịa na akara "Ndị ọkwọ ụgbọala na mmemme".
N'etiti etiti peeji na-esote ị ga-ahụ ebe ọchụchọ. Ọ dị mkpa ịbanye aha ma ọ bụ ihe nlereanya nke ngwaahịa ahụ nke a ga-achọ ndị ọkwọ ụgbọala. Na nke a, anyị na-abanyeHP 620. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị pịa bọtịnụ ahụ "Chọọ"nke dị ntakịrị gaa n'aka nri nke search string.
Ibe na-esote ga-egosipụta nsonaazụ ọchụchọ. A ga-ekekọta egwuregwu niile na edemede, site n'ụdị ngwaọrụ. Ebe anyị na-achọ laptọọpụ kọmputa, anyị na-emeghe taabụ na aha kwesịrị ekwesị. Iji mee nke a, dị nnọọ pịa aha ngalaba ahụ n'onwe ya.
Na ndepụta nke mepere emepe, họrọ ụdị a chọrọ. Ebe ọ bụ na anyị chọrọ software maka HP 620, wee pịa akara "Laptọọpụ HP 620".
Tupu ibudata ngwanrọ ahụ kpọmkwem, a ga-ajụ gị ịkọwa sistemụ arụmọrụ gị (Windows ma ọ bụ Linux) na mbipute ya yana obere omimi. Enwere ike ime nke a na menu ndetu. "Sistem Ọrụ" ma "Version". Mgbe ị banyere ozi niile dị mkpa banyere OS gị, pịa bọtịnụ ahụ "Gbanwee" n'otu mkpọchi ahụ.
N'ihi ya, ị ga-ahụ ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala niile dịnụ maka laptọọpụ gị. Ngwanro niile a na-ekewa n'ime otu site na ụdị ngwaọrụ. Emere nke a iji kwado usoro ọchụchọ.
Ikwesiri imeghe ngalaba achọrọ. N'ime ya, ị ga-ahụ otu ma ọ bụ karịa ndị ọkwọ ụgbọala, nke ga-adị n'ụdị listi. Onye ọ bụla n'ime ha nwere aha, nkọwa, mbipute, nha na ụbọchị ịhapụ ya. Iji malite ibudata ngwanrọ ahọrọ ị chọrọ ka pịa bọtịnụ ahụ. Download.
Mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ, usoro nbudata faịlụ a họọrọ na laptọọpụ gị ga-amalite. Naanị ị ga-echere njedebe usoro ahụ ma gbanye faịlụ ahụ echichi. Ọzọkwa, ịgbaso ntuziaka na ntuziaka nke onye nchịkwa ahụ, ịnwere ike ịwụnye ngwanrọ dị mkpa.
Nke a mejuputara usoro ntinye mbụ nke ngwa kọmputa laptọọpụ HP 620.
Usoro a ga-enye gị ohere ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ gị na-akpaghị aka. Iji budata, wụnye ma jiri ya, soro usoro ndị a:
Soro njikọ ahụ na peeji nke ibudata ọrụ.
Na ibe a, anyị pịa bọtịnụ ahụ. "Download Nkwado Enyemaka HP".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nbudata nke faịlụ ntinye software ga-amalite. Anyị na-echere ruo mgbe ngwụcha ahụ kwụsịrị, ma na-agba faịlụ ahụ n'onwe ya.
Ị ga-ahụ windo nhazi isi. Ọ ga-ebu ozi niile gbasara ngwaahịa a. Iji nọgide na nwụnye, pịa bọtịnụ ahụ. "Na-esote".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịnweta usoro nke nkwekọrịta ikikere HP. Anyị na-agụ ọdịnaya nke nkwekọrịta na uche. Iji nọgide na nwụnye, anyị na-ahụ ntakịrị n'okpuru akara ahụ egosiri na nseta ihuenyo, wee pịa bọtịnụ "Na-esote".
N'ihi ya, usoro ịkwadebe maka nrụnye na ntinye ahụ ga-amalite. Ịkwesịrị ichere oge ruo mgbe ihuenyo ga-egosiputa ozi gbasara nhazi nke HP Support Assistant. Na windo na-egosi, pịa bọtịnụ "Mechie".
Gbaa akara ngosi bara uru na desktọọpụ Nkwado Enyemaka HP. Mgbe ịmalitere, ị ga-ahụ windo ntọala ngosi. N'ebe a, ị ghaghị ịkọwa ihe ndị ahụ n'onwe gị ma pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ahụ ọtụtụ ngwá ọrụ ngwá ọrụ ga-enyere gị aka ijikwa ọrụ dị mkpa nke ọrụ ahụ. Ikwesiri imechie windo niile na-egosi ma pịa na akara "Lelee maka mmelite".
Ị ga-ahụ window nke gosipụtara ndepụta nke omume ndị mmemme ahụ na-arụ. Anyị na-echere ruo mgbe ọrụ ahụ ga-emecha rụọ ọrụ niile ahụ.
Ọ bụrụ na, dị ka a rụpụtara, a chọpụtara ndị ọkwọ ụgbọala na ọ dị mkpa ka arụnye ma ọ bụ emelite, ị ga-ahụ windo kwekọrọ. N'ime ya, ịkwesịrị ịtọpụ ihe ndị ahụ ịchọrọ ịwụnye. Mgbe nke ahụ gasịrị ka ị pịa bọtịnụ ahụ "Download ma wụnye".
N'ihi nke a, a ga-ebudata ma gosipụta ihe niile dị na njirimara na ọnọdụ akpaka. Naanị ị ga-echere ka usoro nwụnye iji mezue.
Ugbu a ị nwere ike iji laptọọpụ gị rụọ ọrụ zuru oke mgbe ị na-anụ ụtọ ịrụ ọrụ kachasị elu.
Nzọụkwụ 3: Ngwá ọrụ ọrụ ọkwọ ụgbọala ọ bụla
Usoro a yiri nke yiri nke gara aga. Ọ dị iche na na enwere ike iji ya ọ bụghị nanị na ngwaọrụ nke HP ika, kamakwa na kọmputa ọ bụla, netbooks ma ọ bụ laptọọpụ. Iji jiri usoro a, ị ga-achọ ibudata ma wụnye otu n'ime mmemme ndị a ezubere iji chọpụta ma budata ngwanrọ na-akpaghị aka. Ntụle dị nkenke banyere ngwọta kachasị mma nke ụdị a anyị bipụtara na mbụ n'ime otu n'ime isiokwu anyị.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na uru ọ bụla site na listi ahụ ruru gị aka, anyị na-akwado iji DriverPack Solution maka nzube a. Mbụ, usoro a dị mfe iji, nke abụọ, mmelite na-ahapụ ya mgbe niile maka ya, ekele nke isi nke ndị ọkwọ ụgbọala dị na ya na ngwaọrụ ndị akwadoro na-eto eto mgbe niile. Ọ bụrụ na ị ghọtaghị na DriverPack Solution onwe gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-agụ ihe mmụta pụrụ iche anyị nyere gị aka n'okwu a.
Usoro nke 4: Ihe nchọpụta pụrụ iche
N'ọnọdụ ụfọdụ, usoro ahụ anaghị aghọta otu n'ime ngwaọrụ na laptọọpụ gị. N'ọnọdụ dị otú a, ọ na-esiri ike ịchọta nke onwe ya ụdị ngwá ọrụ ya na ihe ndị ọkwọ ụgbọala ga-ebudata ya. Mana usoro a ga - enye gị ohere ịnagide nke a n'ụzọ dị mfe ma dị mfe. Naanị ị ga-achọ ịma ID nke ngwaọrụ amaghị, ma tinye ya n'ime igbe nchọta na ntanetị pụrụ iche n'ịntanetị ga-achọta ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa site na njirimara ID. Anyị enyochala usoro a n'ụzọ zuru ezu n'otu n'ime ihe ọmụmụ anyị gara aga. Ya mere, iji ghara ịkọwa ozi, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị soro njikọ dị n'okpuru ma gụọ ya.
Usoro 5: Nyocha Software Nyocha
A na-eji usoro a eme ihe na-adịghị adịkarị, n'ihi na ọ dị ala. Ka o sina dị, enwere ọnọdụ mgbe usoro a nwere ike dozie nsogbu gị na ntinye ngwanrọ na njirimara ngwaọrụ. Nke a bụ ihe dị mkpa ka eme.
Mepee window "Onye njikwa ngwaọrụ". Enwere ike ime nke a n'ụzọ zuru oke.
N'ime ngwá ọrụ jikọtara ị ga-ahụ "Ngwaọrụ Amaghi Ama".
Họrọ ya ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ ịchọrọ ịchọta onye ọkwọ ụgbọala ahụ. Pịa na ngwaọrụ ahọrọ ya na bọtịnụ òké aka ya wee pịa akara mbụ na menu ndị a na-emeghe "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Ọzọ, a ga-ajụ gị ka ị dee ụdị nyocha software na laptọọpụ: "Akpaaka" ma ọ bụ "Ntuziaka". Ọ bụrụ na ịbudatara faịlụ nhazi nke mbụ maka ngwá ọrụ akọwapụtara, ị ga-ahọrọ "Ntuziaka" chọọ ndị ọkwọ ụgbọala. Ma ọ bụghị - pịa na akara mbụ.
Mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ, ọchụchọ maka faịlụ kwesịrị ekwesị ga-amalite. Ọ bụrụ na usoro ahụ na-ejikwa ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na nchekwa data ya, ọ na-etinye ya na akpaghị aka.
Na njedebe nke usoro ọchụchọ na nhazi, ị ga-ahụ windo nke ga-esi na usoro ahụ dee. Dị ka anyị kwuru n'elu, usoro ahụ abụghị nke kachasị dị irè, ya mere anyị na-akwado iji otu n'ime ndị gara aga.
Anyị na-atụ anya na otu n'ime ụzọ ndị a ga - enyere gị aka iji ngwa ngwa wụnye software niile dị mkpa na laptọọpụ HP 620 gị. Echefukwala imelite ndị ọkwọ ụgbọala na nkwado components. Cheta na ngwanrọ kachasị ọhụrụ bụ isi ihe arụ ọrụ arụmọrụ na arụpụta ọrụ nke laptọọpụ gị. Ọ bụrụ na n'oge nhazi nke ọkwọ ụgbọala na ị nwere njehie ma ọ bụ ajụjụ - dee na ihe. Anyị ga-enwe obi ụtọ inye aka.